दमकमा वडाध्यक्षदेखि लिएर कर्मचारीसम्मलाई कोरोना संक्रमण ! स्थिति जटिलतातर्फ जाँदै | Prabhavkari News
२०७८ बैशाख २७, सोमवार
दमकमा वडाध्यक्षदेखि लिएर कर्मचारीसम्मलाई कोरोना संक्रमण ! स्थिति जटिलतातर्फ जाँदै
मैले जे देखेँ त्यहि लेखेँ
दमक/ झापाको दमकमा स्वईच्छाले कोरोना जाँच गराउदा बाहेकको अहिलेसम्म जाँच हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको पहलमा चाँडोभन्दा चाँडो धेरैको पिसिआर जाँच गरिनु पर्ने दबाब र आवाज आइरहेको छ । यसको कारण हो दमकमा कोरोना संक्रमणदर बढ्दो छ र खतराको घण्टि बजेको छ । दमक जिल्लाको अन्य स्थानीय तहहरुको तुलनामा निक्कै जोखिमयुक्त देखिदैछ ।
जाने बुजेकाहरुले कोरोना संक्रमणको लक्षण मिलेको अवस्थामा समेत जाँच नगरेको पनि पाईएको छ । सबै लक्षण मिलेको र आफुलाई कोरोना नै भएको जस्तो लागेको भएपनि आफुले जाँच नगरेको बताउनेहरुको कमी छैन । यसले गर्दा झनै कोरोना बढाउन सहयोग पुग्नेछ । एक त सहज रुपमा कोरोना जाँच हुने प्रवन्ध नमिल्नु र कोरोना सक्रमण हुँदा हेयको दृष्टिले हेर्ने खराव प्रवृतीका कारण जाँच नगराउने गरेको अवस्था पनि देखिन्छ ।
दमकमा वडाध्यक्षदेखि लिएर नगरपालिकाका अधिकृतसम्मलाई कोरोना संक्रमणको औपचारिक पुष्टि भएको छ । सर्वसाधरण तथा समुदायमा पनि कोरोना संक्रमीतहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । पुर्व सावधानी तथा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना पनि खास हुन सकेको छैन । निक्कै संकटको घडि आउने सम्भावाना देखिदैछ । विदेशमा हामीले कन्तबिजोग देखिरहेका छौ, हाम्रो लापरवाहीले त्यहि नियती हामीसम्म आइनपुग्ला भन्न सकिन्न ।
कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि निर्णय गरेरमात्र पुग्दैन यसको कार्यन्वयन पनि जरुरी रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र सघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड र गरेको अनुरोधलाई हामी सबैले पालना नगर्दा कोरोनाले जटिलता ल्याउदैछ । एकातिर लकडाउन र निषेधाज्ञा नगरौ भन्छौ भने अर्कातिर कोरोना रोकथामका लागि हाम्रो तयारी सामान्य बाहेक केहि छैन । होम आइसुलेसनमा रहेका विरामीहरुको गतिविधिलाई पनि प्रभावकारी निगरानी नभएको गुनासो आइरहेको छ ।
नीजि अस्पतालहरुलाई पनि कम्तिमा ३ देखि ५ बेड कोरोना संक्रमण भएकाहरुको उपचारका लागि छुट्याउन भनिएको छ । तर त्यसको अनुगमन तथा उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउने सेवा सुविधाको बिषय नहुँदा यसमा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वभावैले नै जोखिमभत्ता र आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धको कुरा उठाउनु जायजै होला । यस बिषयमा पनि समयमा नै सबैलाई उच्च मनोवल सहित काम गर्ने वातवरण स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्छ ।
३० गतेभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले गरिन आहृवान
दमकमा ३५ सहित झापामा १५७ कोरोना संक्रमित थपिए, ५ जनाको गयो ज्यान
पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ७ जना कोरोना जिते, अहिलेसम्म कोरोना जित्नेको संख्या ३ लाख ६ हजार ७९४
झापामा कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु
सात रोटरी क्लबले गण्डकी अटो मेकानिकल वर्कसप एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा अक्सिजन बैंक स्थापना
हावाका कारण कोरोना संक्रमण तीव्रगतिमा फैलिरहेको दाबी, हावामा कोरोना ३ घण्टासम्म घुमिरहेको पुष्टि !